Switch Micro, Toggle Switch, Limit Switch - LEMA
Lema PBS-003 manga mitarika bokotra bokotra fanosehana miaraka amin'ny ...
Ambongadiny KW12-93 Heater rano herinaratra elektrika ...
Lema KW12-1S 3 Pin-herinaratra microswitch herinaratra ...
Lema KW7-32L visy terminal mametaka hetsika micro s ...
Lema KW7-0II hetsika indroa mihetsika indroa ...
Araka ny tontolon'ny fampiharana isan-karazany dia afaka mitarika ny mpanjifa amin'ny fomba fametrahana sy fampiasana switch izahay, na manome ny mpanjifa soso-kevitra momba ny fifantina arakaraka ny takian'ny teknika.
Rehefa tsy mandeha tsara ny vokatra iray mandritra ny fampiasana dia hanampy ny mpanjifa izahay amin'ny famakafakana ny antony mahatonga ny olana amin'ny alàlan'ny telefaona, mailaka ary santionan'ny vokatra tsy mandeha amin'ny laoniny. Raha ilaina dia afaka mandefa mpiasa teknika any amin'ny tranokala famokarana ho an'ny mpanjifa izahay mba hanampy amin'ny famakafakana mba hamahana ny olany.
Araka ny tontolon'ny fampiharana an'ny mpanjifa, afaka manampy ny mpanjifa izahay hanao fitaovana fanandramana izay manahafana ny tontolon'ny fampiharana hizaha toetra ny vokatra voafantina mba hahazoana antoka fa afaka mamaly ny filan'ny tontolon'ny fampiharana ny vokatra ary manome tatitra momba ny valin'ny fitsapana.
Manomeza torohevitra ara-teknika ara-potoana hanampiana ny mpanjifa amin'ny fametrahana sy ny fampiasana ny vokatra. Mandritra ny famolavolana vokatra vaovao, dia afaka manampy ny mpanjifa amin'ny famitana amin'ny fomba mahomby ny famolavolana sy ny fampandrosoana ny vokatra vaovao izy ity ary hamaha haingana ireo fanontaniana sendra ny fampiharana ny vokatra, mba hahafahan'ny vokatra hampiharina kokoa amin'ny vokatra manohana.
Zhejiang Lema Electric Co., Ltd.dia miorina ao amin'ny tanànan'i Wenzhou, faritanin'i Zhejiang. Ny orinasa dia naorina tamin'ny taona 1986 Lema dia manolo-tena amin'ny R&D, famokarana ary ny fivarotana ny jiro elektrika fanaraha-maso indostrialy. Ny vokatra fototra ao amin'ny orinasa dia misy ny switch micro sy ny fivezivezena (fetra) Switch, switch button switch, switch ny tongotra, switch toggle, protector overload, AC power socket. Rehefa afaka efa ho 30 taona ny fampandrosoana tsy tapaka, dia lasa mpamokatra matihanina lehibe i Lema. switch ao Shina. Ny orinasa amin'izao fotoana izao dia manarona faritra mihoatra ny 11000 metatra toradroa.
MITADIAVA EO AMIN'NY FIAROVANA SY VOLUME KELY
NY MICRO SWITCH
TANORA AMIN'NY FAMPANDROSOANA PRODUKTRA AO AMIN'NY FARITAN'NY AUTOMATION INDUSTRIAL QUALITY avo lenta.
KENDRIKA AMIN'NY Tanjaka MECHANIKA avo sy tontolo iainana ratsy
Vaovao momba ny fitsidihan'ny mpanjifa
Aiza ny sehatry ny asa aman-draharaha eto aminay: hatreto dia nanangana rafitra mpamatsy prosy any Algeria, Egypt, Iran, Africa South, India, Malaysia ary ireo firenena hafa any Azia atsimo atsinanana izahay. Any amin'ny Moyen Orient sy Amerika atsimo ihany koa. Manana mpiara-miasa sy mpanjifa marobe izahay.
Ny switch switch micro tsy tantera-drano dia ampiharina amin'ny tontolo mando. Ny mari-pahaizana fiarovana dia mahatratra IP67. Izy ireo dia be mpampiasa amin'ny fitaovana an-trano, milina. Ny orinasanay dia manome karazana switch micro micro tsy mitovy amin'ny habe samihafa. Lead tariby azo namboarina araka ny takiana.
Electronica Munich dia iray amin'ireo hetsika lehibe indrindra eran-tany ho an'ny Elektronika, Components, Systems ary Applications. Midira amin'ny tontolon'ny electronics manontolo amin'ny toerana tokana. Mampiseho ny switch micro anay, ny switch switch, ny switch amin'ny tongotra ary ny switch switch izahay. Misarika ny sain'ny vi ...
Tranonkala ofisialy nohavaozina
Mba hahafahana manompo bebe kokoa ny mpanjifantsika dia nohavaozina ny tranokalanay ofisialy (www.chinalema.com). Ny fampahalalana momba ny vokatra dia feno kokoa. Ny mpiasa amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia an-tserasera amin'ny fotoana tena izy hanome vahaolana amin'ny mpanjifa.
Push Button Micro Switch, Toggle Switch, Potsero Button Footswitch, Switch switch amin'ny herinaratra, Toggle Switch Boot, Kitendry Micro Push Micro Switch No Nc Miaraka,